Public Health Concern बच्चालाई भिटामिन ए किन खुवाउने ? कमि भए के हुन्छ ? – Public Health Concern
बच्चालाई भिटामिन ए किन खुवाउने ? कमि भए के हुन्छ ?
वर्षको २ पटक कात्तिक र वैशाख महिनाको पहिलो हप्ता भिटामिन ए र जुकाको औषधी निःशुल्क वितरण गर्ने गरिन्छ । मुख्यतः बालबालिकालाई भिटामिन ए को कमीबाट हुने असरहरूबाट बचाउन, रोग प्रतिरक्षाशक्ति बढाउन, बाल मृत्युदर घटाउन र पोषणयुक्त बालबालिका बनाउन यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ । वि.स. २०५० सालदेखि सरकारले भिटामिन ए खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यसपटक पनि आज र भोलि देशैभर महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका र स्वास्थ्यकर्मीबाट भिटामिन ए खुवाइँदैछ । ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्मका आफ्ना बच्चालाई नजिकैको भिटामिन ए वितरण केन्द्र वा स्वास्थ्य संस्थामा लगी भिटामिन ए खुवाई भिटामिन ए खुवाउन सकिन्छ । भिटामिन एसँगै जुकाको औषधी र बालबालिकाको पाखुराको मापन गरी पोषणको अवस्था निर्धारण गरिन्छ । त्यस्तै पोषकतत्व बालभिट्टा पनि वितरण गरिन्छ ।
भिटामिन ‘ए’ ले रतन्धो र अरू संक्रमणका विरुद्ध लड्न सहयोग गर्दछ। केही सागसब्जी, युतूला जातक गर्भवती महिलाहरू रतन्धो रोगबाट पीडित हुन सक्छन्। यसबाट उनीहरूको भोजनमा फूलहरूमा भिटामिन ‘ए’ भिटामिन ए को कमी थियो भन्ने थाहा हुन्छ। यसकारण महिला गर्भवती हुनासाथ प्रशस्त पाइन्छ। शरीरलाई थप भिटामिन ‘ए’ युक्त खानाको आवश्यकता पर्दछ।
भिटामिन ए को कमीबाट केटाकेटीहरूमा अन्धोपन हुन सक्छ। गर्भवती महिलाले भिटामिन ए युक्त खानाहरू खाएर भिटामिन ए को मात्रा शरीरमा जम्मा भएमा यस्ती आमाको दूधबाट बच्चाले पनि भिटामिन ‘ए’ प्राप्त गर्न सक्छ । ‘
विशेषगरी बाल स्वास्थ्यसम्बन्धी रोग र समस्याहरूको उपचारमा भिटामिन ए को प्रयोग गर्ने गरिन्छ । जस्तैः रतन्धो रोग, दादुरा, दीर्घ झाडापखाला, कडा कुपोषण, छालाको रोग आदि ।
भिटामिन ए को कमी हुँदा हुने लक्षणहरू
छाला सुख्खा हुनु र छालाको पटकपटक सङ्क्रमण हुनु ।
आँखा सुख्खा हुनु ।
राती आँखा देख्न गाह्रो हुनु ।
गर्भधान नहुनु ।
बालबालिकाको ढिलो विकास हुनु ।
पटकपटक छाती तथा घाँटीको सङ्क्रमण हुनु ।
घाउ ढिलो निको हुनु आदि ।
भिटामिन ए को प्रमुख स्रोतहरू
बालबालिकाको ५ वर्ष उमेर भित्रमा मानसिक र शारीरिक विकास तीव्र रूपमा हुने हुँदा पोषणको कमी हुन नदिन भिटामिनयुक्त खानाहरू खुवाउन आवश्यक हुन्छ । भिटामिन ए को महत्वपूर्ण स्रोतहरूमा गाँजर, पालुङ्गो, रायो लगायत हरियो सागसब्जी, पहेँलो जातका फलफूलहरू, माछा, घिउ, अण्डाको पहेँलो भाग, फर्सी, ब्रोकाउली, गोलभेडा आदि पर्छन् ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रुपमा ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकाको लागि निःशुल्क भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। वर्षको दुई पटक कात्तिक र वैशाखको पहिलो हप्ता भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि वितरण गरिन्छ।श्रोत : गुगल